Universal 6.2 လက်မ Player ကိုသည်အန်းဒရွိုက်ကားအသံ
Tesla ဒေါင်လိုက်မျက်နှာပြင် android 9.0
Alfa Romeo စီးရီး Android ကားရေဒီယို
၁၀.၁ လက်မ Deckless Android Car Dvd
-Benz က Android ကားကို DVD Player ကို
BMW က Android ကား DVD Player ကို
Audi ရဲ့အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို
Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD
ထိုင်ခုံမှာ Android မော်တော်ကား DVD
Volkswagen ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD
Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Renault ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD
Fiat က Android ကား DVD
Peugeot အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Citroen အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Mazda ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD
Nissan ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD
Subaru အန်းဒရွိုက်ကား DVD
ဆူဇူကီးက Android ကား DVD
Opel အန်းဒရွိုက်ကား DVD
တိုယိုတာက Android ကား DVD
kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Hyundai က Android ကား DVD
Ssangyong အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Ford ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD
GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Chrysler / Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD
Chevrolet ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD
 လျ：86-0755-28217776 အီးမေးလ်ပို့ရန်：sales@szklyde.com
အဓိကစျေးကွက်များ: Americas , Asia , East Europe , Europe , Middle East , Worldwide
ဖေါ်ပြချက်:Universal Player ကိုသည်အန်းဒရွိုက်ကားအသံ,universal 6.2 လက်မကား Audio Player,အန်းဒရွိုက်က Universal အသံကား Player ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd > Universal 6.2 လက်မ Player ကိုသည်အန်းဒရွိုက်ကားအသံ
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / 245 * 245 * 185MM / ဆုကြေးဇူးကို box ကို Set
Supply နိုင်ခြင်း: 350000/Year
Universal 6.2 များအတွက်လက်မ Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, ကနေအများကြီးတန်ဖိုး clients များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြ 1. အန်းဒရွိုက်ကားအသံ စသည်တို့ကိုစပိန်, ဂျာမနီ, အီတလီ, အီရန်, ပါကစ္စတန်, ဒူဘိုင်း, အစ္စရေး, ကိုရီးယား, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိန္ဒိယ, ဘရာဇီး, ။
Universal 6.2 သည် 2.This အန်းဒရွိုက်ကားအသံလက်မ Player ကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်: သင်ဟာအလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သော free.You များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze အားမြေပုံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများအားအရှိဆုံးတိကျမှုနှင့် up- ရနိုင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် to-date ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းများ, traffic ကို data နဲ့ပိုပြီးနေထိုင်ကြသည်။ သင့်ရဲ့လမ်းတစ်ဝှမ်းပိုမြန်လွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှရှာပါ။
3. က Android ကားအသံသည် Universal 6.2 လက်မ Player ကိုပင်မရာထူးအမည်
မျက်နှာပြင် Pixel: * 600 1024
OS ကို: အန်းဒရွိုက် 7.1.1 စနစ်က
CPU ကို: Rockchip PX3 Cortex A9,4core ကို
ပင်မ Frenqency: 1.6GHz
ရမ်: Samsung 2GB DDR3 ကို
Nande Flash ကို: 16 GB အထိ
capacitive Multi-touch screen ကို
ဂျီပီအက်စ် + BT + ရေဒီယို + aux IN + DVR
ကြေးမုံ link ကို + HDMI
Pictures for Android Car Audio For Universal 6.2 Inch Player:
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : Universal Android Car Dvd
KLYDE 10.1 လက်မကားကို DVD ဗီဒီယို Audio Player အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
10.1Inch 2Din က Universal အန်းဒရွိုက်ကားအသံ Navigation System ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
KD-1280 Tesla Style Universal Android 8.1 Car Stereo အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player GPS 2din အန်းဒရွိုက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မော်ဒယ်သစ် 8inch တစ်လောကလုံးကားကို DVD ကစားသမား အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tesla2din ဟာ android ကားတစ်စီး sterero အသံဖိုင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Double Din Universal Infotainment System Android 9.0 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Klyde PX5 Android 9.0 Universal Autoradio အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Klyde 10.1 လက်မဟာ android DSP ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
IX45 Santa Fe များအတွက် 2din ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
Autoradio ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2016-2017 များအတွက်နှစ်ဆ din GPS
GMC 2007-2012 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
DSP ကြက်တူရွေးကဘလူးတုသ်နှင့်အတူ 2013-2016 တွင် AT Qashqai များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီးအီလက်ထရွန်းနစ်
Elantra 2016 ဘို့ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player
2015 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာသည့်စနစ်ဟာ android အာရုံစူးစိုက်
Sportage 2018-2019 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးစတီရီယို
ကြက်တူရွေးဘလူးတုသ်နှင့်အတူ Civic 2016-2017 များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီး DVD player
2016 Elantra ဟာ android 8.0 မာလ်တီမီဒီယာပလေယာ
Sportage 2010-2012 ဘို့ကားတစ်စီးအညွှန်း
Mazda6Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို
IX25 2014-2015 များအတွက် Android ကို92din ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
hot ရောင်းချဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယို 2018 Land Cruiser ဟာ
Universal Player ကိုသည်အန်းဒရွိုက်ကားအသံ universal 6.2 လက်မကား Audio Player အန်းဒရွိုက်က Universal အသံကား Player ကို Universal Player ကိုသည်အန်းဒရွိုက်ကားအီလက်ထရောနစ် Vitara သည်အန်းဒရွိုက် 9.0 ကားအသံ H1 သည်အန်းဒရွိုက် 9.0 ကားအသံ Nissan ကား JUKE အန်းဒရွိုက်ကားအသံ 2016 သစ်တောအန်းဒရွိုက်ကားအသံ
မူပိုင်ခွင့်© 2021 SHEN ZHEN KLYDE ELECTRONICS CO., LTD All rights reserved ။